← Inno As Hin Jiru, Ka’eera!
Leenca Qaraniyo →
Lafa nuti abdi kutanetti—gafa nuti roomine addemnu—Waaqayyo nuti mul’ata. Humna fayyisu isa nuti agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Akkeka fi kayyo keenya geedara.
MAREE: Gafa abdi kutanna kee Waaqayyo sflf ga’e beeka? Mee dhugaa nuuf ba’i.
MEE ITTI YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, abdi dhumate irratti mul’ata mul’ata? Nuti arifate immo, isatu yeroo dhumate irratti mul’ata? Moo lachanu ta’u danda’aa?
SEENSA: Namooni lama galgala Sanbata Gudda (gafa du’a ka’u Goofta) abdi kutatani waan dhuma torbani sana ta’e haasa’aa adeemu turan. Utuu karaa adeema jirani milto argatan waa’ee dhibee isaan itti oddesaan. Yeroo adun dhi’uu irrbata irratti iji isaan baname eenyuma milto isaan baran. Jiru fi jireenyi isaan yerosi kase ni geedarame. Mee Luqoas 24:13-35tt1 dubblis.
Akkata jareen kun milto isaan waliin wal argan mee caaqasi (24: 13-16)
Haasa jaarii Yesus (milto isaan isa hin barin turan) walin haasa’aan haasa attami ture (24:17-27)?
Gaafii Yesus isa dura (24:17a)
Rifanna Jara (24:17b)
Debbi Qileyophaa (24:18)
Gaafii Yesus isa lamata (24:19a)
Seena gababa jaarii himan (24: 19b-24)
Debbi Yesus (24: 25-27)
Akkata Yesus jaaratti of mul’ise (24: 28-32)
Of mul’isu Yesus (24:30-31)
Simana jaara (24:32)
Gabasa jaarii warra kaantti dhihesan (24:33-25)
Gafa abdi kuttane keetti Gooftan waan abdi kee haaressef Waaqayyoof galata gaichi. Ammas woan rakkisa ta’e sii dorsiisu irratti moicha akka siff keenuuf isa waamadhu.
Waan Gooftan namo abdachise dagachuun bayye nama miidha. Miidhama akkasi of! irra ittisuuf moo! gochuu qobda !atao?
Gafa nuti abdi kuttane karaa gadda demnu, Gooftichi inni du’a mo’ate ka’e utuu nuti isa hin hubatin dhufe milto keenya ta’etu nu waliin deema. Dubbi jireenya garaa keenyatti dubbatetu deemsa keenya nuuf midhegsa. Budena jireenya nuuf caabsetu ija keenya bana. Abdi keenya haaresaa. Humna fi akkeka jireenya haaraa nuuf kenna. Bakkee onaa nuti keessatti argamnu keessa nu basetu, foolii urgaa isattin nu waametu seenaa keenya haaressa. Galani Waaqayyoof haa ta’u!
Lalisaa Saaronii (2) Yesuus lalisaa saaronii
Bakkee onaa keessaa barbaaddee na waamtee
Balbala jireenyaa bantee naafkennitee
Fooliin urgaa keetii fagoodhaa na waamee
Gooftaa koo seenaan koo si’iin haareffamee
Gooftichi Dhuguma Du’aa Ka’eera — 2 Comments
adisu m on November 30, 2016 at 6:24 am said:
gariidhaa waqaayoo saa ebbisuu.
fedhasaa talila on May 6, 2012 at 8:33 am said:
baayee gaaridha barnoota guddaa argadheera gooftan isin haa ebisu